97. Firefox မှာ Youtube Videos တွေကို အလွယ်တကူ Download လုပ်ချင်ရင်…. | အဖြူရောင် ကောင်းကင်
97. Firefox မှာ Youtube Videos တွေကို အလွယ်တကူ Download လုပ်ချင်ရင်….
Youtube Videos တွေကို Download လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်…။
အခုပြောမှာကလည်း နည်းထဲက တစ်နည်းပါပဲဗျာ…
မထမဦးဆုံး Download လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ် Download လုပ်မဲ့ Youtube Videos ကို ဖွင့်ထားပါခင်ဗျာ..ပြီးရင် Menu Bar က Bookmarks ကို နိုပ်…
New Bookmarks ပေါ်လာရင် Name မှာ ကိုယ် Videos ရဲ့ နာမည် ဒါမှမဟုတ် နာမည်တစ်ခုခုပေးပြီး Location မှာ ဒီ Code နှစ်ခုထဲက ကြိုက်တဲ့ Code တစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပါ..ပြီးရင် Add ကိုနိုပ်လိုက်ပါ…
K-Lite Codec Pack Full 4.3.8 Beta ကို Download လုပ်လိုက်ရင် flv ဖိုင်တွေကို Windows Media Player, Windows Media Center, WinAmp, VLC, Media Player Classic နဲ့ အခြား video player တွေ့နဲ့ဖွင့်လို့ရပါပြီ………။
« ၀င်းဒိုးWindow Vista ထည့်သွင်းနည်း ( Installation Window Vista )
အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ email လိပ်စာများစာရင်း… »